भौतिक मोह कसरी घटाउने ? - Pradesh Today
Homeफिचरभौतिक मोह कसरी घटाउने ?
भौतिक मोह कसरी घटाउने ?
अनुभवी आध्यात्मिक व्यक्ति जसले जीवन र जगतको अधिकांश भौतिक वस्तुसँग परिचित रहेको हुन्छ । उनीहरू जानकार हुन्छन्, व्यवहारिक प्रयोगबाट मात्र विचार परिस्कृत हुन्छ । विचार परिस्कृत तब भएको देखिन्छ जब व्यक्तिले संस्कारयुक्त कार्य गर्दछ ।
भौतिक मोह कसरी घटाउने ? भौतिक भोगवादी विश्वमा भौतिक मोह घटाउने प्रश्न जटिल छ तर जटिलताभित्रको सरलता प्राप्तिको मार्ग आध्यात्म हो ।
आध्यात्मअन्तर्गत योग साधनाद्वारा व्यक्तिमा क्रमशः इन्द्रिय, प्राण र मनबाट मोह घट्न थाल्छ,त्यसपछि सचेतता, सजगता र सतर्कतापूर्वक कार्य हुन्छ फल त्यसै अनुसारको प्राप्त हुन्छ । अनावश्यक मोह घट्दै जानु आध्यात्मिक योग मार्गको परिचय मात्र होइन स्वास्थ, स्वच्छ, समृद्ध तथा विश्व शान्ति हुनेछ ।
अन्तरविवेक जागृत बर्ककरार राख्न आडम्बर रहित योग साधनाको विकल्प छैन । जब व्यक्तिमा सनैसनै योग साधना फलित हुँदै गरेको अनुभूति तथा व्यवहारिक प्रदर्शन हुन्छ त्यहाँ ‘अपरिग्रिह’ शब्दको जन्म हुन्छ । अपरिग्रिह अथवा त्याग आजको भौतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको एकमात्र शुत्र हो जसले मानव सिर्जित समस्या न्यूनीकरण हुनेछ ।
बंगला, बहान, बैंक ब्यालेन्स, गहना आदि–आदि भौतिक वस्तु संग्रह गर्ने प्रक्रियामा व्यक्तिले स्वयम्लाई समेत बिर्सिसक्यो भने कडा स्वरमा उच्चारण गरिने राष्ट्रवादको खोक्रो उर्जाहीन समाजवाद, साम्यवादजस्ता उत्कृष्ट शब्दहरू अपमानित हुँदैछन् ।
नोबेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को कहरलाई हामी उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न समय सान्दर्भिक देखिएको छ । सन् २०१९ डिसेम्बर अन्ततिर चीनको वुहान क्षेत्रमा देखापरेको संसारलाई बन्दा बन्दी पार्ने भाइरस कसरी उत्पन्न भयो अनुसन्धानको विषय रहेको छ ?
करिब ६ महिना व्यतीत हुँदासमेत नोबेल कोरोनाभाइरसको जन्म र प्रभावबारे वास्तविक अवस्था जनमानसमा आउन नसक्नु त्याग शब्दले प्रभाव पारेको सर्वसाधारण व्यक्तिले अनुभुत गरिसकेका छन् ।
भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंसा, हत्या, धार्मिक, सामाजिक, वर्गीय तथा जातीय विभेदका कारण सिर्जित समस्याको समाधान ‘त्याग’ हो ।
नित्य सनातन संस्कार तथा शास्त्रको अनुसाशनमा रही जीवनशैली, चिन्तनशील, सत् साहित्यको अध्ययन, सत्संग, गायत्री महामन्त्र जप, ध्यान, प्रणायाम, आसन, सात्विक आहारको व्यवहारिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भौतिक शरीर र आत्मालाई पवित्र राखी अनावश्यक भौतिक मोहबाट छुट्कारा प्राप्त गर्न गरिने उच्च मानवीय कर्मलाई पूजा अथवा आध्यात्म भनिएको हो ।
आध्यात्मले शरीर र आत्माको समन्वय गराउने मुख्य भूमिका रहन्छ । देवताहरू समेत लोभिने भगवानबाट प्राप्त उपहार मानवदेह उच्चस्तरीय मानवीय कर्ममा मात्र सदुपयोग हुने गरी भौतिक शरीर प्रयोग हुनुको साटो अनावश्यक अमानवीय कर्ममा उर्जा खर्चिन भागदौडमा व्यक्ति, समाज र राष्ट्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा आजको संकट, रोग, भोगको अवस्था वृद्धि भइरहेको छ ।
प्राकृतिक रूपमा आवश्यक आहारबिहार, भोग, ब्रह्मचार्यको पालना गर्दै शुक्रकृत, इन्द्रिय, विचार, अर्थ, समयको सदुपयोग संग्रह गरौं । अनावश्यक रूपमा भौतिक वस्तुको संग्रह गर्नु दुःखको मुख्य कारण हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि भगवानबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपहार मानवदेह मोह भोग
विलासमा व्यतीत गर्दै कुकुर बिरालोजस्ता घरपालुवा सामान्य जन्तुसमेतले छोडेर जाने गुण कर्म मानव भएर कुनै एक उत्कृष्ट कर्म पहिचानको रूपमा यस संसारमा सुरक्षित पुस्ता हस्तान्तरण गरौं । भौतिक मोहबाट छुट्कारा प्राप्त गर्न त्याग गरौं ।